IVisa yaseRwanda | UKUNGENISA I-EVISA KWI-RWANDA | natvisa.com
Jonga apha ngezantsi kumgaqo-nkqubo wokungena okwangoku ngenxa yeCovid-19. Soloko uthabatha amanyathelo okhuseleko xa usiya phesheya.
Isicelo seVisa saseRwanda kwi-Intanethi
URhulumente waseRwanda usungule inkqubo ye-elektroniki yokufumana i-visa evumela abahambi abavela kumazwe ahlukeneyo ukuba bafake izicelo kwi-intanethi kwii-visa zabo. IRwanda ibonelela ngeendlela ezintathu zokundwendwela ezinokufakwa kwi-Intanethi. Ziyi-eVisa yokuNgena, iNkomfa ye-eVisa kunye ne-East Africa eVisa. Ukufumaneka kwe-eVisa kwenze ukuba inkqubo ibe lula kakhulu kwaye ibhetyebhetye kubahambi, abafuna ukutyelela iRwanda. Abakhenkethi banokugcwalisa nje ifom yesicelo sevisa kwaye bayingenise kwi-intanethi. Abahambi banokukhetha ukwenza intlawulo ye-visa kwi-intanethi okanye xa befika. Nje ukuba ifom yesicelo yenziwe ngempumelelo, abafaki-zicelo baya kufumana imeyile yokuqinisekisa. IVisa iya kunikwa abahambi ukufika kwabo eRwanda.
Iindidi zeVisa zaseRwanda
Ungenelo lwe-eVisa Imeyli 30 Days Ukufikelela kwiintsuku ezingama-30 enye Faka isicelo ngoku
EMpuma Afrika eVisa Imeyli 90 Days Ukufikelela kwiintsuku ezingama-30 multiple Faka isicelo ngoku
Inkomfa eVisa Imeyli 30 Days Ukufikelela kwiintsuku ezingama-30 enye Faka isicelo ngoku
Ukubona izinto (utyelelo lokuzonwabisa)
Ukudibana nabahlobo kunye / okanye nezihlobo
EMpuma Afrika eVisa
Phawula: Le eVisa iyafuneka ukuba iRwanda, iKenya neUganda ziya kutyelelwa kuhambo olunye.
Amanyathelo okuqhubekisa isicelo seVisa
Ifomu ifunyenwe kwaye iphononongwe ukuze ivunywe.
Fumana uxwebhu oluvunyiweyo nge-imeyile.
Ngenisa uxwebhu wakufika.
Ukubonelela ngamaxwebhu afanelekileyo ngexesha lesicelo se-eVisa kubaluleke kakhulu. Ke ngoko, abahambi kufuneka banikeze ikopi ekhutshiweyo kwiphepha leenkcukacha zabo zokundwendwela kunye nefoto yomenzi-sicelo xa esenza isicelo se-eVisa.
Iziphumo ezimbi zovavanyo lwangaphambi kokuhamba kwe-PCR COVID-19 ziya kufuneka kwakhona ukuya eRwanda.
Abafakizicelo kufuneka benze i-id ye-imeyile. I-id iya kusetyenziselwa ukuthumela kuzo zonke izaziso malunga ne-eVisa kunye nokufumana isiqinisekiso se-imeyile se-eVisa. Abafakizicelo kufuneka baqinisekise ukuba i-id ye-imeyile iyasebenza kwaye iyafikeleleka.
Ipasipoti esemthethweni lelinye lawona maxwebhu abalulekileyo afunekayo xa ufaka isicelo se-eVisa eRwanda. Ipaspoti kufuneka ibe nenyanga ezi-6 okanye ngaphezulu. Iipasipoti ezingaphantsi kweenyanga ezi-6 zokuqinisekiswa azizukuvunywa kwaye zinokukhokelela ekugatweni kwesicelo.
Iindwendwe ezine-eVisa zivunyelwe ukuba zingene kuphela kwiindawo zokukhangela ezigunyazisiweyo. Ezi ndawo zokujonga zezi:
Isikhululo senqwelomoya saseKigali
Isikhululo senqwelomoya saseKamembe
Yintoni efunekayo xa ufika
Isiqinisekiso se-imeyile se-eVisa
Iindwendwe ziya kuba nakho ukufumana i-visa yazo xa ifika eRwanda. Ngenxa yoko, kufuneka babonise i-imeyile yabo yokuqinisekisa kwabasemagunyeni.
Iindwendwe kufuneka zibe nencwadana yokundwendwela esemthethweni kunye nayo ekufuneka ibe nenyanga ye-6 okanye nangaphezulu.
Ukufika eRwanda, iindwendwe zinokucelwa ukuba ziveze isatifikethi sezempilo, ukuba kungakho uqhambuko olukhulu ngenxa ye-COVID-19.
Abantu abahamba eRwanda kufuneka babe nemali eyoneleyo yokuzixhasa ngexesha lokuhlala kwabo. Ke ngoko, ubungqina bengxowa-mali bunokucelwa kwindawo yokungena.
Iinkcukacha zeVisa zaseRwanda
Yintoni iRV eVisa?
Ukuya kwilizwe langaphandle kufuna uxwebhu lwemvume evela kwilizwe elo uhambela kulo. Olu xwebhu lokuhamba, olubizwa ngokuba yi-visa, luxwebhu olubaluleke kakhulu ngaphandle kokuba abemi belizwe elininzi abayi kungena kwilizwe langaphandle abaya kulo. Ngelixa ukufumana i-visa yesiqhelo kuthatha ixesha elininzi kwaye kubandakanya iinkqubo ezinzima, inkqubo ye-elektroniki ilula kakhulu.
URhulumente waseRwanda wazisa i-eVisa ngoJanuwari 1, 2018, ethe yanceda abemi belizwe elininzi ukuba bafake izicelo zokundwendwela kwi-intanethi.
Ungasifaka njani isicelo kwi-Intanethi kwiVisa yaseRwanda?
Ukufaka isicelo se-visa ekwi-intanethi ukuya eRwanda kwenziwe lula kakhulu ngurhulumente welizwe. Ngenkqubo ye-elektroniki, abafaki-zicelo ngoku banokubeka izandla kwi-visa ngamanyathelo ama-3 alula. Nanga ke amanyathelo ekufuneka abafaki-zicelo bawalandele.
Gcwalisa ifomu lesicelo: Yonke inkqubo ye-eVisa iya kwenziwa kwi-intanethi, ukugcwalisa ifom yesicelo kunokugcwaliswa kwi-intanethi. Akukho sidingo sokundwendwela indlu yozakuzo. Abafakizicelo kufuneka bakhuphele le fom kwiwebhusayithi karhulumente. Oku kuyakuqinisekisa ukuba ifom yesicelo iyinyani. Le fom kufuneka igcwaliswe kwaye ingeniswe.
Ungeniso lwamaxwebhu: Inyathelo elilandelayo libandakanya ukuhambisa amaxwebhu afunekayo nefom yesicelo. Amaxwebhu anokukhangelwa ngokulula aze angeniswe kwi-intanethi. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba ukuskena kwenziwe ngokucacileyo okanye isicelo sinokulahlwa.
Yenza intlawulo: Inyathelo lokugqibela lenkqubo yokwenza isicelo liquka ukwenza intlawulo ye-eVisa. Abafakizicelo kufuneka bahlawule imali ye-visa ngexesha lokufaka isicelo esifanayo. Banokusebenzisa ikhadi lebhanki okanye ikhadi lokuthenga ngetyala ukwenza le nkqubo ngempumelelo.
Emva kokugqitywa kwesicelo sevisa, le fomu iya kuthunyelwa ukuba iqhubekeke. Kwiintsuku ezimbalwa abafaki-zicelo baya kufumana i-imeyile yokuqinisekisa ye-eVisa. Ukufika kwabo kwisikhululo seenqwelomoya saseRwanda, abahambi kufuneka bangenise ii-imeyile zabo kubasemagunyeni. I-eVisa iya kunikwa abatyeleli ngabasemagunyeni ekufikeni kwabo.
Imiyalelo yabahambi abafaka isicelo seVisa eRwanda
Urhulumente waseRwanda uvumela abemi bala mazwe alandelayo ukuba bangene eRwanda kwaye bahlale apho kangangeentsuku ezingama-90 ngaphandle kokundwendwela- iBenin, iCentral African Republic, iChad, iGhana, iGuinea, iIndonesia, iHaiti, iSenegal, iSeychelles kunye neSao Tome kunye nePrincipe, kwiRiphabhlikhi yaseCongo. , Mauritius, Philippines, Singapore kunye namazwe oMbutho wase-Afrika eseMpuma.
Abahambi abafuna ukutyelela onke la mazwe mathathu iRwanda, iKenya neUganda, kufuneka bafake izicelo kwi-Intanethi zeVisa yabakhenkethi baseMpuma Afrika (i-EATV).
Kutheni ufuna i-eVisa yokungena eRwanda?
Ngaphandle kobuzwe obungaxolelwanga i-visa, abemi belizwe uninzi kufuneka bafumane i-visa yabo yokungena kwi-intanethi. Le mvume yokuhamba evumela iindwendwe ukuba zingene kummandla welizwe laseRwanda.
Lithini ixesha lokusebenza kwe-eVisa yaseRwanda?
Ngokusekwe kuhlobo lwevisa ocelwe ngumenzi-sicelo, i-eVisa isebenza ixesha leentsuku ezingama-30 okanye ezingama-90.
Athini amaxwebhu afunekayo kwi-eVisa yaseRwanda?
Abafakizicelo kufuneka bangenise iikopi ezifundwayo zephepha labo leencwadana zokundwendwela kunye neefoto zabo.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka angenisiwe kugunyaziwe wezokufika eRwanda xa efika?
Ukufika kwabo, abafaki-zicelo kufuneka babonise i-visa yaseRwanda evunyiweyo, isatifikethi sezempilo kunye nobungqina bemali.
Ngaba abafaki-zicelo banikwa imbuyiselo ukuba isicelo se-eVisa siyaliwe?
Hayi, abafaki-zicelo abahlawulwa. Ukuba bafuna i-eVisa kufuneka bayifakele isicelo kwakhona kwaye bahlawule umrhumo wevisa.
Mangaphi amangenelo aya kuvunyelwa nge-eVisa yaseRwanda?
Nge-eVisa esemthethweni yaseRwanda, abafaki-zicelo baya kuvunyelwa kokubini ukuba kungene kunye nangaphezulu.
Kufanele ukuba yintoni ukusebenza kwepasipoti xa usenza isicelo se-eVisa?
Abafaki-sicelo kufuneka babe nepasipoti efanelekileyo, oko kuthetha ukuba ipasipoti kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye ngaphezulu.
Yeyiphi indlela yokubhatala ekufuneka isetyenziselwe ukuhlawula umrhumo we-eVisa waseRwanda?
Iindlela zokuhlawula kwi-Intanethi ziyafumaneka ukuhlawula umrhumo wevisa onje ngekhadi elifanelekileyo letyala okanye ikhadi lebhanki.
Abafakizicelo baya kulufumana njani ulwazi malunga nesicelo sabo?
Naluphina ulwazi ngesicelo se-eVisa luya kunikwa kwi-ID yomenzi-sicelo.
Baza kufumana phi i-visa yabo?
Abafakizicelo baya kufumana i-visa yabo xa befika eRwanda. Kufuneka bangenise imeyile yokuqinisekisa ababeyifumene kwikhawuntara yokufuduka.